Iinduli Ziyabonwa ngobuntwini Ubunzima beentyatyambo
Ubunono Bomntu Iziqhamo - iiLilesi
Ukulinganisela kuyisipho esineziqhamo zentyatyambo ezinikezela nabani na ovulekile ngokwaneleyo ukuba bafumane amandla abo okuphulukisa. Izilwanyana zonyango zisinceda ekwakheni ukutshintsha kwamandla amancinci, ukunciphisa ukungalingani emva kokukhangela.
Kungakhathaliseki ukuba yintoni isini, umntu ngamnye uphethe umxube wezilwanyana (ezenziwayo) kunye namadoda (aphezulu) amandla. Njengogqirha wamagqirha enamandla enye yezinto ndijonga ngayo xa kusebenza kunye nabaxhasi kukubona ukuba ezi zinjini zamandla zisebenzisana njani ngaphakathi kwintsimi yamandla yomntu , kunye nokuhlala kwabo.
Ngaba Ubunjani Bakho BamaMasculine Ukuthunjwa okanye Ubutyebi Bakho Bomfazi?
Ukubandakanya ukusetyenziswa kweentyatyambo ezithile zeentyatyambo okanye umxube wezinto ezisetyenzisiweyo kwisimo sakho sisisombululo esisodwa sokunceda ekuvuseleleni amandla amabhinqa. Iindidi zeengqumbo zonyango zinika amandla okuphilisa axhamlayo ekubambeni iqhosha elincinci lentombazana ukuya kwientyatyambo ezivulekileyo. Ukuphonononga iimpawu zokuphulukisa kwezilungiso zithandathu ezilulwe apha ngezantsi ukufumanisa ukuba zeziphi ezi zifanelekileyo nakwiyiphi na imiba ochaphazelekayo.
Iimfuno Zomfazi - Izilwanyana zokuSindisa!
I-Alpine Lily - i-Alpine Lily flower essence ikhuthaza ukwamkelwa komfazi. Inceda abantu ukuba banzulu ngakumbi. Iphucula amava omoya ngelixa ihlala kwindawo yomfazi.
UCalla Lily - UCalla iLily flower flower essence izilinganiso zamadoda / amabhinqa aphelelane. Eli phephelo lenza ukuba nokwamkelwa ngokwesini.
I-Easter Lily - I-Easter iLily flower essence inceda ukuphosa nayiphi na ingxabano ephakathi malunga nesondo. Ukudibanisa ubulili kunye nookomoya, ukudala i-oasis ngaphakathi.
Fawn Lily - Fawn flower flower essence iququzelela ukubandakanyeka kwehlabathi. Incedisa ukwabelana ngezipho zokomoya nabanye. Inika umama womhlaba uhlobo lokukhuthaza amandla.
UMariposa Lily - Mariposa I-flower yaseLily i-essence ibandakanya umntwana wangaphakathi. Ukunciphisa ubandezeleka nabani na oye walahlekelwa yimicimbi okanye asebenze kakubi kubantwana. UMariposa uphinde unakekele ubudlelwane bomama / intombi, ukuvumela ukubophelela kwabo kwangaphambili ukuba banyamezele ubomi.
I-Tiger Lily - I-Tiger i-Lily i-flower essence inceda kunceda amandla amabhinqa afinyelele kubantu abanobunzima besilisa abanomthunzi obumnyama babo. Isetyenziswe kwakhona njengendlela yokulungisa imithi, ekuncediseni ukuguqula iinguqu eziphosakeleyo ngeli nqanaba lobomi bomfazi.
Ezinye iziLungiso zeeNkcenkceshela ezibhekiselele kwiNkathazo yabesifazane
AmaBlue Blue Eye
Ziyini i-Flower Your Essence IQ?
Uvavanye ulwazi lwakho ngeeNtsholongwane zeentyatyambo kunye noLwaphulo lwezityalo
Dlulisa amehlo kwiifoto ezibalabalaleyo kwiimbali zeentyatyambo zeentyatyambo ezibonisa iintyatyambo zamathambo kwiimeko zabo zendalo ngaphambi kokuba zikhethwe kwaye zenziwe zibe zixhobo zokulungisa . Ngomfanekiso ngamnye umchazo omfutshane unikezelwa ukuchaza ukuba zeziphi iintlobo zemiba enokuphathwa ngayo loo ntyatyambo. Khangela kwakhona iifomula ezikhethekileyo zeentyatyambo .
Iingxelo: I-Flower Essence Repertory, uPatricia Kaminski kunye noRichard Katz - Izixhobo zoMoya
Thetis: Akunjalo nje isiGrike seNyph
IziPhuculo zokuSebenza: Ezilahlekileyo kwiTyhuni eziMatshini
Iintambo ezimbalwa ezibandakanya izinto eziphathekayo ze-Silicate